အမြန်လမ်းတွင် မန္တလာမင်းexpressနှင့်canterကား ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွား - Pissaya News
ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်း မိုင်တိုင် ၂၅၈/၄ အနီးမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက မန္တလာမင်းexpressနှင့်canterကားတို့ ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ ယာဉ်အကူသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယာဉ်မောင်း ကိုမျိုးမင်းလတ်၊ ၃၀နှစ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နေသူမောင်းနှင်လာတဲ့ ယာဉ်အမှတ် YGN 7P- 2—Yutong အမျိုးအစား အနီရောင် မန္တလာမင်း Express ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်ပြီး ရှေ့မှ လားရာတူ မောင်းနှင်နေလာတဲ့ 9K/1—Canter ကုန်တင်ယာဉ်ကို ဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Express ယာဉ်ပေါ်မှာ ယာဉ်မောင်းပါ ကျား ၁၉ဦး၊ မ ၄ဦး၊ ပေါင်း ၂၃ဦးပါရှိပြီး ယာဉ်အကူ အောင်မြတ်သူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ပေပင်လေး စခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များမှ တောင်ညောင်ကုန်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ တပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ်နဲ့ ပို့ဆောင်ခဲ့ ရာ. ဆေးရုံရောက်ရှိချိန်မှာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရန်ကုန် ဗဟိုအမျိူးသမီး ဆေးရုံ အား အပြာရောင်ကဗ္ဗည်းပြား (Blue Plaque) တပ်ဆင်
မိခင်ဖြစ်သူကို သားအရင်းဖြစ်သူက ခေါင်းအုံးဖြင့်ဖိသတ်မှု ဖြစ်ပွား
မိခင်ဖြစ်သူကို သားအရင်းဖြစ်သူက ခေါင်းအုံးဖြင့်ဖိသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ၈.၇.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၂၁း၀၀ အချိန် တရားလို မ—-သည် ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်၊ (၉)ရပ်ကွက်၊...
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ချန်းဟိုင် အား ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ...
H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၁ ဦးထိ ရှိလာ
ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၁ ဦးထိရှိလာကြောင်း သိရပါတယ်။ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ H1N1 ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ သေဆုံးသူ ၁၈ ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ သေဆုံးသူ...
ဂျာမန်ဖလားအကြို ဗိုလ်လုပွဲသို့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တက်ရောက်၊ ပြင်သစ်ဖလားတွင် ပီအက်စ်ဂျီ ကွာတားဖိုင်နယ်တက်
ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်နေပြီလို့ သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေက. . .
Madame X တေးအယ်လ်ဘမ်အသစ်နဲ့ ပရိတ်သတ်ရှေ့ပြန်ရောက်လာတဲ့ မက်ဒေါနား